मधेस आन्दोलनका क्र’ममा २१० जनालाई लगाइएका मु’द्दा फिर्ता लिन ! जसपाले गृह मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको छ ! – Gorkhali Dainik
मधेस आन्दोलनका क्र’ममा २१० जनालाई लगाइएका मु’द्दा फिर्ता लिन ! जसपाले गृह मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको छ !
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस आन्दोलनका क्रममा २१० जनालाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन बिहीबार गृह मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको छ। पत्रमा मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरूको नाम राखिएको छ । जसपा का नेता डा.सुरेन्द्र झाले बिहीबार दिउँसो गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची बुझाए का हुन्।
२४ थान मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका २१० जनाको नाम र ठेगानासहितको सूची मन्त्रालयमा बुझाएको डा.झाले बता ए। जसपाका अनुसार सूचीमा प्र’देश २ सरकारका सामा जिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको नाम पनि छ। २०७२ सालको तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्र’ममा जलेश्वर मा थमन विकको ह’त्या घ’टनामा शर्मालाई अ’भियुक्त बना एर मु’द्दा चलाइएको छ।
सूचीमा जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर शंकर शाहको नाम पनि छ। २१० जनाको सूचीमा रहेका सबै जसपाका नेता–का’र्यकर्ता भएको पार्टीले जनाएको छ। याे खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ । भिडियो अन्तिममा राखिएको छ
यो पनि पढ्नु होस ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा वि”घटित प्र’तिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पु’नर्स्थाप ना भएपछि सुरु भएको अधिवेशन औचित्यहीन बन्न पुग्नु मा स्वार्थको द्वन्द्व नै प्र’मुख का’रण भएको देखिएको छ। प्र’तिनिधिसभा बैठकलाई प्र’भावकारी बनाउन सरकारको भूमिका म’हत्वपूर्ण हुन्छ।
प्र’तिनिधिसभाको औ’चित्य नभएको देखाउन बिजने सवि हीन बनाउन चाहन्छन्। उनी प्र’तिनिधिसभामा विवादित वि’धेयक ल्याएर बैठक चल्न नदिने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।यसै खेलअन्तर्गत सरकारले बिहीबार प्र’तिनिधि सभा बैठकमा सूचना प्र’विधि वि’धेयक ल्याउने तयारी गरे को थियो।
तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले वि’रोध गरेपछि त्यो रोकियो। सदन मा कुनै पनि प्र’स्ताव वा वि’धेयक नि’र्णय प्र’क्रियामा लै जाँदा पारित नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सम्म को अवस्था आउँछ। यसैकारण अ’धिवेशन अन्त्य हुनेबेला आइपुग्दासमेत प्र’तिनिधिसभा बैठक बिजनेसविहीन हुन पुगेको छ।
संसद् अधिवेशन औपचारिकता मात्रै भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बिजनेस दिनुपर्ने भनेर लागि परेको देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थको द्वन्द्वले अहिले संसद् बिजनेसविहीन भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा आमनेसामने हुनैपर्नेछ, एक महिना त बाँकी हो, त्यसपछि एउटा निकास निस्कने नै छ !नागरिक दैनिकमा छापिएको छ !
Prevसूर्य थापाको टिप्पणी : ‘छविलाललाई प्रचण्ड बनाउन जीवन लगाएको गौरवमय इतिहास साक्षी छ’
Nextयस कारण शैक्षिक संघसंस्थाहरु फेरि बन्द हुन सक्ने